76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man မော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
LEGO မှာ တွေ့ခဲ့ရတဲ့ အချက်ငါးချက် Marvel 76208 ဆိတ်သားလှေ
23 / 02 / 2022 24 / 02 / 2022 Matt Yeo 479 Views စာ0မှတ်ချက် 76084 Asgard များအတွက် Ultimate စစ်တိုက်, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76200 Bro Thor ရဲ့ New Asgard, 76208 ဆိတ်သားလှေ, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Captain America, Captain America: The First Avenger, ဆိတ်, ဦးထုပ်, Gorr the God Butcher, Valkyrie ဘုရင်, Symbiote God ကို သတ်ပါ။, Korg, Lego, Lego Marvel, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Marvel စတူဒီယို, Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, MCU, တန်ခိုးကြီးသော Thor, Necrosword, Asgard အသစ်, အနီရောင် ဦး ခေါင်းခွံ, မင်္ဂလာပါ, Thanos, Thor, Thor: အချစ်နှင့်မိုးကြိုး, ဗိုက်ကင်း, ဗိုက်ကင်း Longship ဖတ်ပြီးသားမိ 3
မကြာသေးမီက ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည့် 76208 The Goat Boat သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော LEGO တစ်ခုဖြစ်သည်။ Marvel အစုံလိုက် ဖြစ်သလို တစ်သားတည်းဖြစ်ခြင်း။
22 / 01 / 2022 22 / 01 / 2022 Jack Yates 580 Views စာ 1 မှတ်ချက် ၇၆၁၉၀ Iron Man: Iron Monger Mayhem, 76192 Avengers: နောက်ဆုံးစစ်ပွဲ, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Lego, lego ရုပ်ရှင်, Lego Marvel, Lego ရုပ်ရှင်, Marvel, Movie,, YouTube ကို ဖတ်ပြီးသားမိ 1
02 / 11 / 2021 02 / 11 / 2021 Chris Wharfe 786 Views စာ0မှတ်ချက် 76105 The Hulkbuster: Ultron Edition ကို, 76178 နေ့စဉ် Bugle, ၇၆၁၉၀ Iron Man: Iron Monger Mayhem, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Avengers: Ultron ၏ခေတ်, Avengers: Infinity စစ်ပွဲ, Hulkbuster ပါ, သံမဏိလူသား, Lego, Lego Marvel, Lego ကောလာဟလများ, Marvel, ကောလာဟလာ, အဆိုပါ LEGO Group ဖတ်ပြီးသားမိ 2
09 / 10 / 2021 10 / 10 / 2021 Jack Yates 602 Views စာ0မှတ်ချက် 76183 Batcave: ပုစ္ဆာမျက်နှာချင်းဆိုင်, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, Batman, ကော်မရှင်နာဂေါ်ဒွန်, Dc, ဂျက်ဖရီ Wright, Lego, Lego DC က, Lego Marvel, lego minifigure, Lego Minifigures, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Michael keaton, အသေးစား, သေးသေးလေး, အဆိုပါ Batman, Watcher, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...? ဖတ်ပြီးသားမိ 2
06 / 10 / 2021 07 / 10 / 2021 Jack Yates 1128 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76201 ဗိုလ်ကြီးဗြိတိန်နှင့် The Hydra Stomper, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Gamora, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego Marvel, Marvel, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...? ဖတ်ပြီးသားမိ 2
13 / 09 / 2021 13 / 09 / 2021 Jack Yates 681 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, ကလင် Barton, Disney+, Hawkeye, ကိတ်ဆရာတော်, Lego, Lego Marvel, Loki, Marvel, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, နောကျတှဲရထား, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...? ဖတ်ပြီးသားမိ 2